सुन्तला गाउँ बनाउन धमाधम अन्य प्रजातिका रुख काटिदै , पर्यावरणीय दुष्प्रभाव बढ्ने खतरा ! – ebaglung.com
सुन्तला गाउँ बनाउन धमाधम अन्य प्रजातिका रुख काटिदै , पर्यावरणीय दुष्प्रभाव बढ्ने खतरा !
२०७४ फाल्गुन ३०, बुधबार १६:४०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बागलुङ, २०७४ फागुन ३० । काठेखोला गाउँपालिकाको झण्डै ३ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ वडा नम्बर १, २, ४, ६ र ७ मा १६ वटा ब्लक निर्माण गरी सुन्तला खेतीलाई विस्तार गरी सुन्तलाको पकेट क्षेत्र (ओरेञ्ज जोन) बनाउने तयारी थालिएको छ । सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेका स्थानहरुमा क्षेत्रफल विस्तार गरी स्थानीय कृषकहरुको आर्थिक आम्दानी उकास्न यस्तो अभियान थालिएको बताईएको छ । सुन्तला खेतीका लागि असर पार्ने गाउँमा रहेका अन्य प्रजातिका रुखहरुलाई कटान गरेर सुन्तलाका बिरुवा मात्र राख्ने गरी अभियान नै सुरुवात गरिएको छ ।
अबको केही बर्षमा सुन्तला गाउँका रुपमा परिचित गराउने गरी अन्य विभिन्न जातका रुखहरु कटान गर्न थाली सकिएको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर–६ का वडा अध्यक्ष युक्तप्रसाद कंडेलले बताए । उनले वडा नम्बर ६ बाट मात्रै यस बर्ष १ करोड ३ लाखको सुन्तला बिक्री भएको बताए । उनले सबै रुखलाई कटान गरी सुन्तला रोपेपछी आम्दानी अर्को बर्ष नै दोब्बर हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले सुन्तलाको बोट वरपर रहेको रुखहरु कटान गरेपछि मात्रै त्यसले उत्पादन पनि बढि दिने वडाध्यक्ष कँडेलको भनाई छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना मार्फत कृषि ब्लक बनाउने अभियान सुरुवात गरिएको हो । गाउँपालिकाको अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढि बिहुँमा सुन्तला खेती राम्रो उत्पादन हुने भएकाले पनि अन्य पेशा भन्दा बढी सुन्तला खेती तर्फ नै ध्यान दिएको उनले बताए ।
रुख काट्ने बेलामा केही कृषकहरुको गुनासो आएपनि केही बर्ष पछि उनै कृषकहरुले धन्यवाद दिने गरी दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढेको कँडेलको भनाई छ ।
सबै वडामा एक लाख भन्दा बढि विरुवा लगाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि बिरुवामा ५० प्रतिशत र अन्य मेसिन तथा सामग्रीहरुमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने वडा कार्यालयले बताएको छ । अहिले रुख काट्ने मेसिन वडाले नै खरिद गरेर धमाधम रुख काट्न थालिएको छ । यस वडामा मात्रै ६ सय घरधुरीले सुन्तला उत्पादनलाई बृद्धि गर्ने वडाध्यक्ष कँडेलले बताए । ‘एउटा काठको रुख हुर्काउन ३० बर्ष लाग्छ, र त्यसको मुल्याङकन गर्दा ५ हजारको मात्रै आम्दानी लिन सकिन्छ, तर सुन्तलाको बोट ५ बर्षमा फलाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’ कँडेलले भने । अन्नबालीका हिसाबमा पनि सुन्तलाले कयौँ गुना बढी आम्दानी गर्न सक्ने बताउदैँ झन्झटिलो नहुने र सजिलै आम्दानी गर्न सकिने भएपछि यसलाई प्राथमिकता दिएको कँडेलले बताए ।
‘गाउँमा घरहरु पनि खाली हुन थाले, बाँझो बारीमा एक दिन दुःख गरे पुग्ने भएकाले पनि धेरै फाईदा देखेर हामी यो अभियानमा लाग्यौँ, यसमा विदेशबाट फर्केकाले पनि साथ दिएका छन् ।’ कँडलले भने । जापान गएर फर्केका बिहुँका धनपति निउरेले अर्काको देशमा गएर १८ घण्टा काम गर्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा गरेको मेहनतले बढि प्रतिफल दिने गरेको बताए । अहिले वडा कार्यालयले नै सुन्तला खेती विस्तारमा साथ दिएकाले खुशी लागेको भन्दै अझै क्षेत्रफल र बोट विस्तार गर्ने बताए । निउरेको सुन्तलाको बोटले बर्षेनी डेढ लाख भन्दा बढीको आम्दानी दिने गरेको छ ।
त्यस क्षेत्रमा ५ लाख भन्दा बढीको सुन्तला बिक्रि गर्ने कृषकहरु पनि छन् । निउरे जस्तै सोही गाउँका बालानन्द कँडेल पनि उस्तै मख्ख छन् । सुन्तला नभएर सुन फल्ने विश्वासका साथ सबै कृषकहरु एकजुट भएर आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने रुखलाई कटान गरी सुन्तलाको विरुवा रोप्ने अभियानमा लागेको बताए । युवा कृषक प्रकाश निउरेले आफु जस्ता युवाहरुलाई यो अभियान प्रभावकारी हुने देखिएपछि यसमा साथ दिएर अगाडी बढेको बताए । उनले बिहुँबाट सयौँ मानिसहरु विदेशी भुमिमा गएर काम गरिरहेकाले उनीहरुलाई यो अभियानले फर्काउन समेत दबाब सिर्जना हुने विश्वास लिएको बताए । वडा नम्बर–६ की दलित महिला सदस्य सम्झना बोहोराले सुन्तला खेतीलाई विस्तार गर्दा महिलाहरुको आर्थिक स्तर बृद्धिमा मद्दत पुग्ने बताईन् ।
यस्तै अर्की महिला सदस्य जमुनादेवी कँडेलले केही बर्षमा नै गाउँको मुहार फेर्ने गरी यो अभियानमा लागेको बताईन ।
तर गाउँका सबै रुखहरु काटेर पैसाकै लागी केबल सुन्तलाका बिरुवामात्र लगाउँदा पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई बिचारै नगरिएको गुनासाहरु आएका छन् ।
तस्वीर सौजन्य- रबिना बोहोरा ।
नियन्त्रणमा आएको रेसुङ्गा वन क्षेत्रको आगो फेरी अर्को स्थानबाट सल्कियो !